Tihar SMS In Nepali / Happy Tihar 2019 Message
51. Happy Dipawali Wishes in Nepali Roman font for your best friend
दिवाकरको प्रकाश, चमक र ताप पृथ्वीमा छरिए जस्तै, तिम्रो जीवन यो सालको तिहारले सौन्दर्य र उत्साहले भरी दियोस। मेरो यही कामना छ।
52. Happy Dipawali Wishes in Nepali Roman font for your best friend
लेखेर लेख्न सकिन्न मित्रताको ब्याख्या कहिले
टाढा होस् या सम्पर्क बिहिन साथी हामी जहिले
तिहार को शुभकामना सबैभन्दा तिमीलाई पहिले
53. Happy Dipawali Wishes in Nepali Roman font for your best friend
हामी भाग्यशाली छौ किनकि हामीले जीवनमा जहिलेनी दोस्रो मौका पाउछौ र त्यस्को हामीले सदुप्रयोग गर्न जान्नुपर्छ तबमात्र जीवनले सार्थकता पाउनेछ
54. Happy Dipawali Wishes in Nepali Roman font for your best friend
हामी एक राम्रो मानव, एक राम्रो व्यक्ति र एक राम्रो नागरिक हौ। तिहार आफैलाई राम्रो संसारको लागि अझ राम्रो बनाउने एक समय हो।
55. Happy Dipawali Wishes in Nepali Roman font for your best friend
मेरा सबै फेसबुके साथीहरू र परिवारलाई तिहारको शुभकामना। शान्ति, हर्सोल्लास, समृद्धि र स्वास्थ्यको कामना।
56. Happy Dipawali Wishes in Nepali Roman font for your best friend
हजूर आफनो जीवनको किताब लेखनुहोस र त्यसका पानाहरु आशा र नयाँ अवसरले भरी दिनुहोस। तिहारको शुभकामना।
57. Happy Dipawali Wishes in Nepali Roman font for your best friend
यदि मलाई जादू आउदो हो त म हजूरको सबै नराम्रो कुरा जति भस्म गरीदिन्थे, साथ साथै म हजूरको जीवनमा धेरै राम्राराम्रा कुराहरुले भरी दिन्थे।
58. Happy Dipawali Wishes in Nepali Roman font for your best friend
उत्साह र साहसपूर्ण यो हजूरको जीवनले सफलता चूमोस। तिहारको हजुरलाई शुभकामना।
59. Happy Dipawali Wishes in Nepali Roman font for your best friend
यो गन्तव्य होइन, यो यात्रा हो। तपाईं आफ्नो साहसिक कार्यको प्रत्येक दिन मजा लिनुहोस् ।
60. Happy Dipawali Wishes in Nepali Roman font for your best friend
तिहारमा आफ्नो दाजुभाई दीदिबहिनीसग हुन पाउने ब्यक्ति साच्चै नै भाग्यमानी हो। सबैजना खुसी र भाग्यमानी रहुन्।
Tihar SMS in Nepali / Happy Tihar 2019 Message Upcoming search Terms:
tihar sms, tihar message, tihar sms 2019, tihar message 2019, tihar 2019, tihar 2076, tihar wishes, tihar wihses 2019, tihar wishes 2076, tihar sms message, tihar sms to sister, bhai tika sms, bhai tika message, tihar sms in nepali, tihar sms nepali, tihar sms in english, tihar message nepali, tihar message in english, tihar message in nepali, tihar sms and message
#Happy Tihar 2020, Happy Tihar 2020 Message, Happy Tihar 2020 Messages, Happy Tihar 2020 SMS, Happy Tihar 2020 Wishes, happy tihar 2077, Happy Tihar 2077 Messages, Happy Tihar 2077 SMS, Happy Tihar 2077 Wishes, Nepali SMS, Tihar 2020, Tihar 2077, Tihar festival, tihar festival Nepal, tihar festival Nepal 2020, tihar festival of Nepal, tihar festival sms, Tihar message in Nepali, tihar nepal, Tihar Nepal 2020, Tihar Nepal 2077, tihar sms, Tihar sms in Nepali, tihar songs, Tihar Songs 2020, Tihar Songs 2077